ကသစ်ပွင့်သုတ် နဲ့ ကသစ်ရွက်ဟင်းချို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကသစ်ပွင့်သုတ် နဲ့ ကသစ်ရွက်ဟင်းချို
ကသစ်ပွင့်သုတ် နဲ့ ကသစ်ရွက်ဟင်းချို
Posted by အောင် မိုးသူ on Nov 17, 2014 in Food, Drink & Recipes, How To.. | 25 comments
ထူးထူးခြားခြား မုန့်လုပ်နည်းတွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဟင်းချက်ပုံတွေကို ကျွန်တော်ဟာ မေမေ့ဘေးမှာ နေရင်းနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်။ မေမေဟာ ငါးချဉ်စားချင်တယ်ဆိုလည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးတယ်။ အိမ်တိုရှည်စားချင်လား။ ခေါက်မုန့်လား၊ မုန့်ပျားသလက်လား၊ မုန့်ဟင်းခါးလား၊ အုန်းနိုးခေါက်ဆွဲလား၊ လက်သုတ်စုံလား၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားနေကြဆိုတော့။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ထူးခြားတဲ့အရာတွေလည်း ချက်စားလိမ့်ရှိ တယ်။ ငါးဆားတယ် ၊ ငါးပိကောင်ကအစ မေမဟာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးလေ့ရှိတယ်။ သည်လိုချက်စားတိုင်း လည်း နင့်အဖေရှိစဉ်တုန်းက ဟင်းချက်ပြုတ်တာ သိပ်ဝါသနာပါတာလို့လဲ ပြောလေ့ရှိတယ်။ သည်တော့လည်း ကျွန်တော်အချက်အပြုတ်ဝါသနာပါတာ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ခါ တစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေဆုံချင်တဲ့အခါ စားနေကျဟင်းအမယ်တွေမဟုတ်ဘဲ ခပ်ဆန်းဆန်းလေးတွေ ချက်ကျွေး လေ့ရှိတယ်။ မုန့်လုပ်စားကြတယ်ဆိုလည်း မြန်မာမုန့်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်စားကြတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ခပ်ဆန်းဆန်းဟင်းချိုလေးတစ်ခုနဲ့ အသုတ်လေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျတော်တို့မိသားစုဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တောင်ဥက္ကလာဆိုတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုရဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာနေထိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်လေးထဲမှာ ကသစ်ပင်တော်တော်များများရှိပါတယ်။ လယ်ကွင်းအစပ်တွေမှာ ပေါက်နေတာပေါ့။ ကသစ်ပင်က အပင်ပြီးမျိုးဖြစ်ပြီး ပင်စည်၊အကိုင်းနဲ့အခက်အလက်တွေမှာ ဆူးမည်းမည်း လေးတွေပါပါတယ်။ အပွင့်ကတော့ ဆောင်းအကုန် နွေအကူးလောက်မှာ ပွင့်တတ်ပါတယ်။ ကသစ်ပွင့်က အခိုင်လိုက်ပွင့်ပါတယ်။ အဖူးတွေဟာ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်လေးတွေလိုပါပဲ။ ပွင့်လာရင်တော့ နီနီရဲရဲနဲ့ လှလည်း လှပါတယ်။ သူ့အရွက်ကတော့ သုံးရွက်ကိုတစ်ခိုင်ပါ ထူးခြားတယ်။ ပြီးတော့ ကသစ်ရွက်အရောင်ဟာ အခြားသစ်ရွက်ရောင်တွေထက် အစိမ်းရောင်လင်းလင်းလေးပါ။ အပွင့်အခိုင်မှာ ထူးခြားတာက အပေါ်ယံ အမှုန်လေးတွေရှိပါတယ်။ တစ်ရက်တော့ မေမေကပြောလာပါတယ်။ လယ်ကွင်းထောင့်က ကသစ်ပင်မှာ ကသစ်ပွင့်တွေပွင့်နေပြီ တံချူနဲ့ သွားခူးချေ ကသစ်ရွက်နုနုလေးတွေပါခူးခဲ့ဆိုပြီး။ ကျွန်တော် ခူးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မေမေပြုလုပ်ပုံကို ပြောပြပါ့မယ်။
ကျွန်တော်ခူးလာတဲ့ ကသစ်ပန်းအခိုင်းလိုက်ကိုရေဆေးပါတယ်။ ကသစ်ရွက်လေးတွေကို တစ်ရွက်ချင်း သင်ပါတယ်။
ရေဆေးပြီးသား ကသစ်ပွင့်ပန်းခိုင်ကို ရေနွေးပူပူမှာ ရေနွေးဖျောလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ရေနွေးဖျော်ပီးသား ကသစ်ပွင့်ကောအဖူးကော မထူးမပါးလှီးပါတယ် ကသစ်ဖူးလေးတွေက ညိုတိုတိုဖြစ်နေပြီး အပွင့်လေးတွေအရောင်ကတော့ ရဲရဲလေးပေါ့။
ကသစ်ပွင့်သုတ်ဖို့အတွက် မန်ကျည်းသီးကိုဖျော်ထားရပါမယ်။ ကြက်သွန်နီးဆီချက် ချက်ထားရပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နဲ့ဆို မကောင်းပါဘူး။ ပဲမှုန့်အကျက်မှုန့်ရယ် ငရုတ်သီးမှုန့်ရယ် ဟင်းခတ်မှုန့် ဆားရယ်ဆို ပြည့်စုံပါပြီ။
လှီးပြီးသားကသစ်ပွင့်လေးတွေကို မန်ကျည်းရည် ပဲမှုန့် ကြက်သွန်နီဆီချက် ငရုတ်သီးမှုန့် ဟင်းခတ်မှုန့်ဆား တို့ကို အချိုးကျထည့်ပြီး သုတ်ရုံပါပဲ။ ကသစ်ပွင့်ရဲ့ ခပ်စိမ့်စိမ့်အရသာနဲ့ ကသစ်ပွင့်မှာသဘာဝအလျောက်ပါတဲ့ အမှုန်လေးတွေရယ်နဲ့ သုတ်ထားတဲ့ ကသစ်ပွင့်သုတ်ဟာ တော်တော်အရသာရှိပါတယ်။ သူနဲ့တွဲဖက်စားသုံးဖို့ ဟင်းချိုကတော့ ကသစ်ရွက်နုနုလေးတွေ ငရုတ်ကောင်းအနည်းငယ် ကြက်သွန်ဖြူဓါးပြားရိုက်ထားပြီး ချက်ထားတဲ့ ဟင်းချိုပါပဲ။ ဟင်းချိုမှုန့် အနည်းငယ်သာသုံးရုံနဲ့ ကသစ်ရွက်ရဲ့အချိုဟာ ဘယ်အချိုနဲ့မှ မတူကြောင်း ကသစ်ရွက်ဟင်းချိုဟာ တော်တော်သောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာအရမ်းလွယ်ကူတဲ့အတွက် ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကသစ်ပင်ကို မမြင်ဖူးကြမှာစိုးလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သုတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမရှိတဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။ အခါသင့်ရင် ပုံတွေတင်ပေးပါ့မယ်။
ဘကြီး အောင် has written 220 post in this Website..
တခါမှ…. မစားဖူးဘူး ။
ဖွေးဖွေးကိုလွှတ်ပေးလိုက်မယ်….။ အိမ်နားက ဖွေးဖွေးဆိုတဲ့ အရူးမလေးရှိတယ်။ မပူနဲ့။
မနေ့က တုန့်ယမ်တွေ့လို့.. ကိုယ်နည်း.. ကိုယ့်ဟန်နဲ့ တစ်ဇလုံကြီးချက်သောက်လိုက်တယ်.. :))
ဒီအရွက်ကတော့ မသိ.. မမြင်ဖူးဘူး..
ကသစ်ပင်မှာ နေရာအနှံ့မှာပေါက်တယ် အပင်မှာ ဆူးပုပုမည်းမည်းလေးတွေရှိတယ်။
.ကသစ်ပွင့် လေးတွေတွေ့တိုင်း ပြုတ်စားချင်လိုက်တာလို့
ရတယ်လေ။ အမြဲစားနေကျ နောက်ကျရင် ပိန်းရိုးဟင်းခါးချက်တာ တင်ဦးမယ်။
.တခါမှ…. မစားဖူးဘူး ။စားလို့ရမှန်းကိုမသိတာဗျ….
.အိမ်နောက်မှာရှိတဲ့ ကသစ်ပင်အကြီးကြီးပြိုလဲကျတော့ အိမ်နောက်အဖီပေါ်ကျလို့ ဓါပုံရိုက်ပြီး .ဂဇက်မှာတင်ခဲ့ဖူးပါရဲ့
ကသစ်ရွက်ဟင်းချိုက အလွန်ချို အရမ်းကောင်းတယ်။
ကသစ်ပွင့် ကို ကြားဖူးတယ်။
စားလို့ ရမှန်းလဲ မသိတာ။
ဓာတ်ပုံလေး ပြထားတာ အတော်လေးတန်ဖိုး ရှိတဲ့ ဗဟုသုတပါ။
အပွင့်လေးတွေ က ရဲရဲတောက် လှလိုက်တာ။
အပွင့်လေးသုတ်၊ အရွက်လေး ဟင်းရည်ချက် နဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အပင်ဘဲ။
မင်းကြည့်ရတာ အမေ့သား ထင်ရဲ့။
သားလိမ္မာ လေး ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ။ :))
အိမ်နားမှာတော့ ရှိတယ်ဗျ။ ကသစ်ပင်တွေလေ ခုတော့ ရှားသွားသလားလို့။ ကျတော်က အပင်တွေကို ချစ်တယ် ဘာအပင်မဆို။
နောက်ဆို သေချာကြည့်ခဲ့ ဘယ်နားလဲဆိုတာ။
ကသစ်ပွင့်ကိုသုတ်တယ်ဆိုတော့ အဖြူပွင့်လို့အောက်မေ့ဒါ …..
ကသစ်ပန်းက ရဲရဲလေးတွေလေ သူက တစ်ပြိုင်တည်းမပွင့်ဘူး အစဉ်လိုက်ပွင့်တာ အဖူးတွေပါ သုတ်စားလို့ရတယ်။
..ကျော့်ကို ငယ်တုန်းက အမေက ..ဟင်းချက်ခိုင်းသဗျာ..ဘယ်တော့မှမကူဘူး..အဲ့တာမိန်းမတွေလုပ်တဲ့အလုပ်..တားတားနဲ့ ..ဘာဆိုဘားမှမဆိုင်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ…အခု ကွကိုယ် လဲနေရရော..ငတ်ရော
တစ်ဖြည်းဖြည်းတတ်မှာပေါ့ အမေက ငယ်ငယ် ဈေးရောင်းဖူးတယ်။ ကော်ညင်းပေါင်း ကအစ ခေါက်မုန့် တိုရှည်ကအဆုံး မုန့်ဖက်ထုပ်တို့ အစုံပဲပေါ့ အဖိုးနဲ့အဖွားက ထားဝယ်ဆိုတော့ ထားဝယ်မုန့်တွေလည်း လုပ်တတ်ပါ့။ အဖေကလည်း ဟင်းချက်ဝါသနာပါတော့ ကျတော်လည်း ဝါသနာပါတာပေါ့။
ကသစ်​ပင်​ကိုအရမ်းမုန်းတာ ကြည့်​ကိုမကြည့်​ချင်​​လောက်​​အောင်​ဖြစ်​ခဲ့တာ။ ကသစ်​ဖု​ကြောင့်​​ခြေဖ၀ါးကွဲဖူးလို့။ ​တော်​​တော်​နာတာ။ ​​ပြောမပြတတ်​​အောင်​ပါပဲ။ ကသစ်​ရွက်​နဲ့အပွင့်​ကိုစားရ​ကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူး။
အသူရာတွေ သိကြားမင်းကို စိတ်နာတဲ့ အပင်၊ အပွင့်မို့လားဟင်?
အဲဒါက သခွတ် ဆိုလား။ (အထင် နော်) lol:-)))
မကေဇီပြောတာတော့ သိဘူးဗျ ။ ကသစ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ မြစပဲရိုးပြောသလိုပဲ သခွတ်ထင်တယ်။ သခွတ်ပန်းဆိုတာလည်း ရာဇ၀င်နဲ့လေ။ (ထင်တာပါ)
ဟီးး အရီး​ပြောတာမှန်​တယ်​။ သခွပ်​ပင်​ ပါ​ကေဇီ။
သခွပ်​မှာသရဲရှိတယ်​လို့လူကြီး​တွေ​ခြောက်​​ပေမဲ့ သခွပ်​ပွင့်​သွား​ကောက်​​နေတာပဲ။ အပင်​​ရောက်​ရင်​သရဲထက်​ဆိုးတဲ့ ခါချဉ်​နီ​အ​ကောင်​ကြီး​တွေ။ အဲ့ဒါလည်းသွား​ကောက်​တာပဲ။ က​လေးဘ၀တုန်းက သတ်​တိ​တွေ ဘယ်​​ပျောက်​သွားမှန်းမသိ​တော့ဘူး။ :-(
မွှားတဲ့ အခါလည်း မွှားပေမပေါ့။
၂ ပင်လုံး မမြင်ဖူးဘူးးး
သခွတ်ပင်က မီးတစ်ကျည်ကျည် ဆိုတာ လည်း အဲ့ သခွတ်ပင်ပဲ မို့လားဟင်??
တာဝတိသာမှာက ကသစ်ပင်၊အသူရာပြည်က သခွတ်ပင်လေ။
သိကြားမင်းက အသူရာတွေ အရက်မူးတုန်း ပစ်ချပြီး တာဝတိသာကို အပိုင်ယူလိုက်တာ၊အပင်ချင်းက ဆင်တယ်တဲ့(ဟုတ်မဟုတ်မသိ)
ပွင့်တော့မှ အနီရောင်မဟုတ်ပဲ အဖြူရောင်တွေ ဖြစ်နေတော့ အသူရာတွေ စိတ်ဆိုးပြီး စစ်သွားတိုက်တာ။